Voahangy Rajaonarimampianina Lasa mpiaro ny zon�ny voafonja indray
Ilaina ny fanajana ny zon�ny voafonja eto amintsika, hoy ny vadin�ny filoham-pirenena Voahangy Rajaonarimampianina omaly raha nitsidika ireo vehivavy voafonja eny Antanimora ny tenany sy ireo delegasiona notarihiny.
Ny mba hanampy sy hanolo-tanana azy ireny aza no tokony hatao, hoy izy fa tsy hanao tsindrio fa lavo. Tao anatin’ny hafaliana tanteraka no nandraisan’ireo vehivavy voafonja izany saingy nohararaotin’ny solontenan’izy ireo ihany koa ny nangataka tamin’ny vadin’ny filoha ny mba hanafainganana ny fijerena ny antontan-taratasin’ireo tsy mbola voatsara ankoatra ireo efa nahafeno fepetra ka afaka mamita ny ambin-tsaziny any ivelany. Tsy niandry ela fa teo no ho eo dia namaly ny minisitry ny fitsarana Charles Andriamiseza fa handray ny andraikiny izy sy ireo mpiara-miasa aminy. Tonga nanotrona ny vadin’ny filoham-pirenena ny vadin’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta. Tsiahivina fa efa mihoatra ny 3.000 isa ireo voafonja tazonina etsy Antanimora amin’izao raha tokony ho 800 isa no antonona ny trano hitazonana azy ireo.